အမေပိုင်တဲ့ မဏ္ဍိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမေပိုင်တဲ့ မဏ္ဍိုင်
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Mar 6, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 60 comments
မွန်မွန်ရဲ့ကဗျာ အမေ့မွေးနေ့ အမှတ်တရ
“အမေပိုင်တဲ့ မဏ္ဍိုင်” by – မွန်မွန်
“ငါ့သမီး စာကျက်နေရင် ပြီးရော” တဲ့…
“အမေသာ သူငယ်ချင်းကောင်းပါ” တဲ့…
“ငါ့သမီးတက်လမ်းအတွက်ဆို ခွဲနိုင်ပါတယ်” တဲ့…
(၂၂) နှစ် ကျော်ခဲ့ပြီ…
ရဲရဲသာ ပြန်မှီချလိုက်ပါ…အမေ….။ ။
**ဒီနေ့က မွန်မွန့်အမေရဲ့ (၄၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပါ… ဒီရက်ပိုင်း အမေ့ကို အရမ်းသတိရနေတယ်… အိမ်က ပြန်လာပြီးတော့လည်း လွမ်းနေတုန်းပဲ.. အဲ့ဒါကြောင့် ကဗျာထိုင်ရေးဖြစ်သွားတယ်… တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ အမေ့မွေးနေ့မှာပဲ ကဗျာလေးကို အဆုံးသတ်ရေးနိုင်သွားတယ်… အမေ့အတွက် အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်နော်…။
ဂနေ့ … မားတားရဲ့ (၄၅) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဘာလားကွယ် …
မားတား တီယောက် ဂနေ့ မွေးနေ့မှစ ….
စိတ်၏ ကျမ်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ဘာစေဂျောင်း …
တားတားအံ ဂလည်း ဆုတောင်း ပေးလိုက်ဘာဒယ် ခညာ …
မွန်လေး ကိုတော့ ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းဂျောင်း ….
ဘာပဲဖစ်ဖစ်.. မားတားကို ဆုတောင်းပေးဒါ ကျေးဇူးတင်ဘာဂျောင်း…
တော်တော် တရား မမျှဒါဘဲ …
ဒါ တမင်တကာ ညစ်ပတ်တာ …
ဘယ့်နှယ်ကွာ .. ဧည့်သည်ကိုကျဒေါ့ -3 ဒဲ့ …
အိမ်ရှင်ကျဒေါ့ .. +5 .. တဲ့ …
တော်တော် မတရားဒါဘဲ …..။
ဟေ့ .. အိမ်ရှင် တောင်မလေး …
နာ့အနီ …အဲ .. အဝါဒွေ ပျက်အောင် ပြန်ဖျက်ပေး ..
မဖျက်ပေးလို့ကတော့ အမေ နဲ့ တိုင်ပေါပလိုက်မှာ ..
အွန်.. နာဆိုလည်း အဲ့စိမ်းဝါတွေ တန်းစီနေတာပဲ.. ခု -2 ဖစ်တွားဘီ.. နာလည်း ဆက်မလုပ်တတ်တော့ဝူး…. ရွာထဲက တစ်ခါ စိမ်း.ရွာပြင်က တစ်ခါစိမ်း..နာလည်းနှစ်ခါပဲ စိမ်းတတ်တယ်.. တိတော့ဝူး..မကျေနပ်..လေဖြတ်.. ဒါဘဲ…
သူ့ မားသားက ကျုပ်နဲ့ အသက် မတိမ်းမယိမ်း
ဟုတ်.. ယူတေးဝူးနော်… အူးလေးဆာမိ..
ကောင်လေးက မခေါ်သေးလို့လား P:
အမေက တော်တော်ငယ်သေးတာပဲ နော်.. မွန်…
၀မ်းသာပြီး သမီးလေးမွေးရကျိုးနပ်တယ်လို့ ပီတိဖြစ်မှာမှာ အူးစည် တိနေဒယ်…
အူးစည်နဲ့ကော အနာဂါတ်မဏ္ဍိုင်လေး မဆောက်ချင်ဘူးလား…
မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြတယ်တော့ ထင်ပါနဲ့နော့်.. ကျလိ.. ကျလိ.. :528:
ကိုရင် နဲ့ မဟာဘာဂျာ …
နပန်းသတ်ပွဲ ဆိုဒါ …
ကျား မကောင်းဘူးနော် …..
ဒီမဏ္ဍိုင်လေးတောင် ခိုင်အောင် မနည်းလုပ်နေရတာ… အနာဂတ်မဏ္ဍိုင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဦး…
လုံမအမေ.. အိမ်သစ်ထူတာ.. (အများဆုံး) ၂၂နှစ်သမီးမှာပဲ..။
တော်လိုက်တဲ့ သဂျီး.. ဒါကြောင့်လည်း သဂျီး ဖြစ်နေတာနေမှာ…
အမှန်ပဲ.. အမေအိမ်ထောင်ကျတော့ အသက်က (၂၂) နှစ်ပါ… သိပ်မကြာဘူး.. ကလေးယူတယ်ပေါ့… လုံမကိုမွေးပြီးပြီးချင်းပဲ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူ.. မောင်လေးနဲ့က တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ကွာတာ…
ဆိုတော့..အခု အသက် (၄၅) နှစ်မှာ.. သားသမီးတွေက အသက် (၂၀) ကျော်.. အကုန်လက်လွတ်ကုန်ပြီး အေးဆေးဖြစ်သွားပြီပေါ့…. …. …. သို့ပေမယ့်လည်း သူ့ခေတ် နဲ့ ကိုယ်ခေတ်က မတူလေတော့… အမေ့ခြေရာတော့ မနင်းပါရစေနဲ့ဦး.. သဂျီးရေ… တစ်ယောက်တည်းနေတာတောင် အနိုင်နိုင်ရယ်…
အကို့ သမီးလေးလဲ ကြီးလာရင် မွန်လေးလို လိမ္မာရင် ကောင်းမှာနော်…အမေကိုချစ်တဲ့ သမီး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူးတဲ့…ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုခါနီးအချိန်ဆို မိဘနဲ့နည်းနည်း ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်တယ်နော်…နောက်ပြီး အမေ ၆၀ ကျော်လာရင် ပိုဂရုစိုက်နော်…စကားတွေ ထပ်ကာထပ်ကာပြောတတ်လာတယ်…မေ့လဲ မေ့တတ်လာတယ်…စိတ်မရှည်စရာပုံစံတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်…အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင် အသက်အရွယ်ကြောင့်ဆိုတာ အမေ့ကို နားလည်ပေးလိုက်ပါ…အကောင်းဆုံးကတော့ မြေးလေးတွေ မြန်မြန်မွေးပြီး မြေးထိမ်းခိုင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း…အသက် ဆယ်နှစ် အနည်းဆုံးပိုရှည်သွားနိုင်ပါကြောင်း…ဦးဂျော်နီ အမေတော့ မြေးအကြောင်းများ ပြောနေရလို့ကတော့ မျက်နှာတင်မက မျက်လုံးပါ ပြုံးနေပါကြောင်း….
တကယ်တော့ မွန်မွန်လည်း သိပ်မလိမ္မာပါဘူး… သားအမိနှစ်ယောက်က ဝေးတသက်သက်..နီးတကျက်ကျက်ပဲ… တွေ့ရင်လည်း သိပ်တည့်လှတယ်မဟုတ်ဘူး..
အသက်ကြီးလာရင်လို့ အဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်လည်း နားလည်ပေးတတ်အောင် သေချာသတိထားရမယ်ထင်တယ်…
အဲ… မြေးကိစ္စကတော့.. မောင်လေးကလေးတွေလည်း သူ့မြေးပဲလေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
အမွန့်ရင်ခွင်ထဲ ဦးကြောင် ရှိနေပြီဆိုတာ (မကြိုက်ရင် ဦးကြောင်ရင်ခွင်ထဲဝင်ကွာ) အမေသိရင် ငါ့သမီးလေးကို ကြောင်သူတော်ကြီး စောင့်ရှောက်နေပြီဆိုပီး ပျော်နေလိမ့်မယ်။ မြန်မြန် အသိပေးလိုက်…. :harr:
အဲ့ဒါဆိုရင် … သေချာတယ်… အလုပ်ထွက်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီး ပြန်ခေါ်ထားတော့မှာ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ချစ်စရာ့ အမေ နဲ့ ဒီ သားသမီး တွေ
အသက်ရှည်ရှည်၊ အချိန်ကြာကြာ၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ပါစေ။
မွန်မွန်လေးလည်း ချစ်တဲ့သူတဲ့ အမြန်တွေ့နိုင်ပါစေ။ (ဟိ၊ ဘာမှမဆိုင်)
နောက်မကျသေးပါဘူး..ချစ်မရယ်.. ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ဒါမယ့်..အောက်က တစ်ခုက ဘယ်က ပါလာတာတုန်း…
အမေ့ မွေးနေ့အမှတ်တယ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး
ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ လန်းဖြာ၍ သမီးလိမ္မာလေးနဲ့ အတူ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်စေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါဂျောင်းးးး :528:
အမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်.. ဦးမိုက်…
ညည်းအမေရဲ့ အသက်က ဦးကျောက်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းမို့…
ငယ်ချစ်ဦးနဲ့သာ အကြောင်းပါခဲ့ရင် ဦးလေး သားသမီး ညည်းထက်ကြီးပြီ…
ဖလား ဖလား… ကြောင်နာကြီးကို လွတ်အောင်ရှောင်…
အသက်သိပ်ကွာတဲ့ ယောက်ျား မယူနဲ့…
သမီးအမေကို “ဟက်ပီး ဘတ်ဒေးပါ” လို့
တစ်ငယ်တည်း ငယ်ချစ်ဦး လုပ်မနေနဲ့…. သမီးသာဆို ကောက်ပစ်လိုက်လို့ ပြန်ချော့လို့မရ ဖြစ်မယ်.. ဟွန်း…
ဟို… ချစ်မိရင်တော့ အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်.. မတိဝူးပဲ.. အဟိ..
အမေ့ကို ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးကျေးပါ…
ကဗျာလေးက အရမ်းကို သက်ဝင်ခံစားလို့ရပါတယ်ကွယ်..
လုံမ မေမေလဲ မွေးနေ့မှသည် အသက်ရှည်. အနာမဲ့.. ချစ်သမီးလေးရဲ့ကျေးဇူးသိတတ်မှုအောက်ပါ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာ နေသွားနိုင်ပါစေလို့ မမ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်.. :528:
comment reply နောက်ကျတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျိုး….
ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်.. မမမွန်ကစ်ရေ…
ဒီကဗျာဖတ်ပြီး သမီးနေရာကခံစားလို့မရပဲ အမေနေရာဆီရောက်သွားတယ် … သြော် .. အသက် .. အသက် …
ငယ်ငယ်တုန်းကသာ မိုက်ရူးရဲဆန်ခဲ့ရင် အခုလောက်ဆို မွန်မွန့်အရွယ် သမီးတစ်ယောက်လောက်တောင် ရှိနိုင်မှာပါလား …
အဲ့ဒီ မိုက်ရူးရဲမဆန်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို နည်းနည်းလောက် သိခွင့်ရမလားဟင်..အစ်မဝေ…
လုံမလေး မေမေ မွေးနေ.မှာ သားသမီးတွေရဲ. အားတွေနဲ. ကျန်းမာချမ်းသာ စွာ နေထိုင်ပီး တရားဘာဝနာ ကျင့်ကြံပွားနိုင်ပါစေ လို.
သမီးအလိမ္မာလေး မွန်မွန်နဲ.ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…
အမေဆိုတာ တချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို.ရဲ. မှီတိုင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ သူမှာမှီစရာလိုတဲ့အခါ ဒီသားသမီးတွေပဲ မှီစရာရှိတာမဟုတ်လားဗျာ..
လုံမလေးလဲ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သမီးကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေဗျားးးးးးးးးးးးးးးး
တောင်းပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်အောင် ကြိုးစားပါတယ်… တိုက်တိုက် နဲ့ အုပ်အုပ်လည်း မကြာမီ အိမ်ဆည်းလည်းလေးနဲ့ ပိုမိုပျော်ရွှင်ပါစေလို့…
ငါလည်း နင့်အမေနဲ့အတူ နင့်ကို မှီလို့ ရမလား.. အဟတ်ဟတ်..
နင်မှီချင်တာ ငါ ဟုတ်ရဲ့လား… လူကလေးမရယ်…
မွန့်မွန့်အမေ အတွက်..မင်္ဂလာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ..
ဒါနဲ့ ချစ်တဲ့ အမေကို ဒီကဗျာလေး ပရင့်ထုတ်ပေးဖတ်ကြည့်ပါလားး
တော်တဲ့ သမီးလေးကြောင့် ပိုပျော်အောင်လို့ ရယ်..
ပရင့်ထုတ်ပြီး နယ်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်ရှင့်…. ပို့ပေးတဲ့သူကတော့ ပြောပါတယ်..အမေမျက်ရည်ကျဦးမယ်တဲ့…
သမီးမွန်မွန်ရဲ့ အမေ ညီမလေးတစ်ယောက် အသက်ရာကျော်ရှည်လို့ ကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပါ့… အမေက လေးလေးထက် ငယ်တယ်နော်…
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူပါ လေးလေးရေ….
မွန်မွန့်အမေရဲ့ (၄၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့…
ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးပါနော် အန်တီအိ… အမေ့ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်နော်..အမေလည်း အတော်ပျော်မယ်ထင်တယ်…
သားသမီးတွေရဲ့ သူတို့စိတ်ကြိုက်မတွေ့သေးလို့ အတောင်ဖြန့်မပြေးမချင်း
ကပ်ချွဲ၊ မြှောက်စားနေတယ့် ဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါစေဗျာ။
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အူးလေးရေ…
ဘာလို့ မှန်တာတွေ ပြောနေမှန်း မသိဝူး… ဟီး..
ဟုတ်..မနို.. တကယ်တော့ သိပ်မလိမ္မာပါဝူး… ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပဲ..ဝေးနေရင် တည့်တယ်.. ဟီး..
ငယ်ငယ်ကသမီး ကြီးတော့ ထီး လို့ ဆိုတာ….
မွန်မွန်ကတော့ ထီးထက်ပိုတဲ့ မှီတိုင် မို့လို့…..
ကဗျာဖတ်ပြီး မွန်မွန့်အမေအစား အားရှိမိပါရဲ့။
မွန်မွန့်အမေလည်း ဒီစာကို ဖတ်ရရင် ဗိုက်တာမင် အလုံး၁၀၀ သောက်ရတာထက် အားပိုရှိသွားမယ်။ :hee:
အဲ့ဒါကြောင့် အော်မေ့ဂိုဏ်းထဲပဲ ရာသက်ပန် ၀င်မလားလို့..
မမွန်ရဲ့ အမေ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်
ညမလေး မွန်မွန် ရယ်….
မွန်မွန့်မေရီးး က တောင်းတိုင်း မပြည့် တဲ့ *ဆု* ကိုရထားတဲ့ အမေ တစ်ယောက်ပါ….
ဘာနဲ့ မှ လဲ လို.မရ နိုင်တဲ့ သမီး လိမ္မာ လေး ရထားတာလေ….
ရ တာ နာ မဖြစ်အောင် အတော်လေးကြိုးစားထားရတာ…
ဒါပေမယ့်သူကလေးက လူ့ဝတ်ကြောင်နဲ့ မဟုတ်တော့ဘူးကွဲ့
သူ့မေမေမယ်င်္သီလဝတ်ပြီး ဆယ့်ငါးနှစ်အကြာမှာ ကျုပ်ကိုထားပြီး
ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင် ဆိုပြီးပြောခဲ့ဟောခဲ့တာတွေမနည်းဘူး
အွန်.. ဂယ်ကြီးလား အူးလေးရဲ့…
မွန်မလေး လုံလုံရဲ့ 
ချစ်သမီးရဲ့ကဗျာလေး..လက်ဆောင်ရလို့ ..။
သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လက်ဆောင်လေး….
၀မ်းသာမျက်ရည်တော့ ကျမယ်ထင်ပါတယ်.. အခုထိတော့ သတင်းမကြားရသေးဘူး.. ကဗျာက လမ်းမှာပဲ ရှိသေးတယ်ထင်တယ်…
မွန်လေးရဲ့ မာတာမိခင် ကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်
လိမ္မာတဲ့ သမီးလေး မွန်မွန့် အမေလည်း အသက်ရှည် ကျန်းမာ လို့ ချစ်သမီးလေးနဲ့ မကွဲမကွာ နေသွားရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် .. တီဒုံရေ… တောင်းပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေလို့…
မိဘ အတွက်အခုလို အမှတ်တရ ရှိတတ်တဲ့ သမီးလေး
လိမ္မာရေးခြားရှိလိုက်တဲ့ သမီးလေး ယနေ့ခေတ်မှာ အင်မတန်ရှားသွားပြီ ဖြစ်တဲ့
မိဘ ကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့သူပေပဲ…….
၀ါရင့်သမ္ဘာရင့် ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ရေးထားတယ်လို့တောင် ထင်စရာပါ…………
ဂလုံမလေး မွန်မွန်ရဲ့ မေမေ နောင်နှစ်မွေးနေ့တွေ မွေးနေ့တွေမှာ ပျော်ရွင်ပါစေကြောင်းးးးးးးးးးး
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ မိုင်းဘိုရေ….
ဆုတောင်းပေးတာလည်း ကျေးကျေးပါ… ဂလုံ ဆိုပါလား… ဘာပဲဖစ်ဖစ်..နာဂ တနင်္ဂနွေသမီးဆိုတော့ ဂလုံလည်း ကောင်းတာပါပဲ… ဟိဟိ
လုံမလေးရေ – ကျန်းမာရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်နော်။ အစားသေချာဂရုစိုက်ခိုင်းပါဦး။ ဆေးပဲသွင်းနေမှာဆိုးလို့။
ဟုတ် အစ်မရေ.. အဲ့ဒါပဲ ရန်ဖြစ်နေရတာ.. စားချင်စိတ်မရှိလုိ့ဆိုပြီး ဘာအသားမှကို မစားဘူး… ပြောပေးပါဦး….
လေးဆယ့်ငါးနှစ်တာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့
BC ပေးလိုက်ပြီ. သဂျားကို…